Nayakhabar.com: अब तयारी के छ सरकारको ?
अब तयारी के छ सरकारको ?
काठमाडौं-नयाँ संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि ‘अघोषित नाकाबन्दी’सम्म पुगेपछि सरकारले भारतको शीर्षस्थ तहसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने पहल गरेको छ । अमेरिका रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सकभर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टेलिफोन संवाद गराउने, नभए अमेरिकामै रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र मोदीबीच भेटवार्ता गराउने पहल भएको छ ।
हाल काठमाडौंमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसका लागि पहल तीव्र पारेका छन् । भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज ३ असोजमा अमेरिका गएकी थिइन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी र केही दिनअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल अमेरिका गएका छन् । नेपाली शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंह पनि अमेरिकामा छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी पनि अमेरिकामा छन् । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र उनका भारतीय समकक्षीबीच सार्कको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा सोमबार भेटवार्ता हुनेछ ।
त्यसक्रममा उनीहरूबीच साइडलाइनमा संक्षिप्त वार्ता हुने कूटनीतिक स्रोतले बतायो । ‘भारतको विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक रूपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ काठमाडौंमा रहेका राजदूत उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘न्युयोर्कमा भारतको शीर्ष नेतृत्वसँग हाम्रो राजनीतिक तहको कुराकानी हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, न्युयोर्कमा मोदीसँग उपप्रधानमन्त्री सिंहको भेटका लागि समय तय भइसकेको छैन । राजदूत उपाध्यायले काठमाडौं आउनुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालसँग दिल्लीमा छलफल गरेका थिए ।
त्यसक्रममा दुवै देशबीच राजनीतिक तहमा संवादमार्फत एक–अर्काको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजदूत उपाध्यायको प्रस्तावलाई डोभालले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । उपाध्यायले नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे कुराकानी गरेका थिए ।
उपाध्यायले भारतको शीर्ष राजनीतिक तहको सन्देश प्रधानमन्त्री कोइराला, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, तीन दलका शीर्ष नेता तथा मधेसका आन्दोलनरत नेतासँग पनि सुनाइसकेका छन् । उनले केही दिनमा भारतसँगको असमझदारी हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । अाजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।